Ireo pejy 9 tsara indrindra hanovana sary amin'ny Internet toy ny pro | Famoronana an-tserasera
Rehefa miasa miaraka amin'ny sary ianao dia tena ilaina ny fananana mpamoaka sary satria io no fitaovanao. Na izany aza, misy ny fotoana, na satria tsy ao amin'ny solosainao lehibe ianao, satria tsy manana fahatsiarovana amin'ny PC ianao, na noho ny antony hafa dia mila mpamoaka sary an-tserasera hiasa.
Talohan'izay dia tsy mora ny fahazoana an'io, tsy lazaina akory hoe tsy eo amin'ny haavon'ny programa napetrakao amin'ny solosainao izy ireo. Saingy niova be ny toe-javatra ary afaka mahita safidy maro mifaninana ianao, na amin'ny tranga sasany aza mihoatra aza, ireo izay azo apetraka. Te hahafantatra ve ianao hoe inona ireo safidy arosonay?
1 Pixlr, mpanonta sary amin'ny Internet tsara indrindra
3 Photoshop Express, mpanonta sary an-tserasera Photoshop
9 Fotoflexer, mpamoaka sary an-tserasera matihanina
Pixlr, mpanonta sary amin'ny Internet tsara indrindra
Ity mpamoaka sary an-tserasera ity dia iray amin'ireo ankafizin'ireo miasa amin'ny sary an-tserasera satria izy io dia iray amin'ireo fitaovana feno indrindra ho hitanao. Hanombohana azy, tsy programa iray monja izy io raha ny marina, fa misy roa. Voalohany dia hanana Pixlr Editor ianao, tena mitovy amin'ny Photoshop ary noho izany dia haingana be ny miasa sy mahatakatra izany.
Ny tena tianay indrindra tamin'ity programa ity dia izany manana fahaizana misaronaIzany hoe, mahafantatra ny fomba fametrahana sary amin'ny alàlan'ny sosona ary avy eo ariana ny iray na ny iray hafa nefa tsy mila manao ilay asa intsony hatramin'ny voalohany.
Ny safidin'i Pixlr hafa dia Pixlr Express. Izy io dia manana fampiharana tsotra kokoa, satria miorina amin'ny lafin-javatra efatra fotsiny izy: manoratra lahatsoratra, manitsy ny sary, manampy effets ary asiana sticker. Mety ho an'ny rehefa tsy mila mikasika na inona na inona.
Fantatry ny mpamorona sary rehetra izy. Raha ny marina dia misy ny akany atao amin'ny sehatra maro hafa toa ny famoahana, marketing, sns. Izany no antony tsy tokony hanadinoanao azy.
Tonga lafatra, ohatra, ho an'ireo magazay an-tserasera izay mila atiny amin'ny tambajotra sosialy na amin'ny bilaogin'izy ireo. Ianao dia afaka mahazo fonony ho an'ny tambajotra, lohateny, sora-baventy ... Mila mifidy ny habeny tadiavinao fotsiny ianao ary manampy izay ilainao. Ary raha tsy nahazo aingam-panahy ianao dia ampiasao ireo maodely efa nomanina mialoha ary ampanjifainao araka izay itiavanao azy. Tsotra toy izany!
Photoshop Express, mpanonta sary an-tserasera Photoshop
Raha mpankafy ny Photoshop ianao dia azo inoana fa tsy ho tianao ireo programa hafa mihitsy ary hiasa miaraka aminy foana ianao. Fa tokony ho fantatrao fa manana ny safidinao amin'ny mpanonta sary an-tserasera Photoshop ianao. Antsoina manokana hoe Photoshop Express izy io ary kinova maivana kokoa amin'ilay fantatrao, nefa mbola ampy ihany hiasa amin'ny ambaratonga mandroso miaraka aminy (tsy afaka miantso anao matihanina izahay satria ho fohy loatra raha tsy manana sosona sy safidy ilaina hafa).
Ary satria efa nandiso fanantenana anao ny voalaza etsy ambony, dia hiezaka ny hanitsy azy izahay. Ho an'ity, amin'ny maha-mpamoaka sary an-tserasera anay dia manolotra an'i Photopea izahay, izany hoe tena mitovy amin'ny Photoshop. Raha ny marina, ny interface-ny dia tena mitovy amin'ity iray ity ary manana fitaovana mandroso maro ianao.
Ankoatr'izay, ny fanohanana endrika endrika samihafa, manomboka amin'ny PSD ka hatramin'ny RAW, XFC ... dia plus izay tsy azonao amin'ny programa sary an-tserasera hafa, izay ampiana fanampiny.
Raha tsy mampiasa ny sosona amin'ny sary ianao, dia tsy ho sarotra aminao ny hihazona azy, satria mora be ny mampiasa azy io ary mahatakatra ny mety ho omeny anao.
La interface dia mazava ary tena mitovy amin'ny Photoshop. Hanana sosona ianao, eny, saingy tsy ny fiasa rehetra efa nahazatra anao tamin'izy ireo. Ankoatr'izay dia misy sivana, fanitsiana, fanovana ny sary ...
Ary ny tsara indrindra, misy amin'ny fiteny 18, ka ny Espaniôla no ho iray amin'izy ireo.
Fotor dia lafo vidy ho an'ireo izay tsy manana fifandraisana Internet izay haingana loatra na manana olana amin'ny fahatsiarovana ny PC, satria haingana dia haingana izy io, haingana kokoa noho ireo mpamoaka an-tserasera hafa, ary izy io ihany no misafidy azy.
Amin'ny ambaratonga teknika, ho afaka hiara-hiasa aminy avy amin'ny findainao ianao, takelaka ... ary hahafahanao manao collage, manitsy sary na mamorona zavatra mihitsy aza. Ho fanampin'izay, manana ny fiasa fanodinana HDR izy, izay hahazoanao valiny amin'ny sarinao miaraka amin'ny mifanohitra avo lenta.
Amin'ity tranga ity dia manana kinova maimaimpoana sy pro ianao izay ampian'izy ireo fanampiny fanampiny.
Ity mpamoaka sary an-tserasera ity izay manana anarana izay mampatsiahy anao ny Pokémon dia iray amin'ireo fandaharana an-tserasera tsara indrindra. Ary io dia, anisan'ireo tombony ananany, ny famelana anao hametraka plugins, sivana na lohahevitra izay hanova ny interface. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ho azonao atao ny milaza amin'ilay programa hoe ahoana no tianao anaovana azy ho anao, manaingo azy io.
Mazava ho azy, indrisy fa ny fitaovana ananany dia fototra, fa raha tsy mila miasa be loatra amin'ny sary ianao dia mety ho safidy tsara hiara-miasa izany ary, tampoka, ataovy araka ny itiavanao azy.
Ity mpamoaka lahatsoratra ity dia tonga lafatra ho an'ireo izay vaovao amin'ny tontolon'ny fanovana sary satria mamela anao hiasa haingana dia haingana sy hianatra hampiasa ny fitaovana rehetra anananao. Mazava ho azy, araka ny efa nolazainay, mety ihany ho an'ny vao manomboka, satria tsy manana endrika be loatra hamonjy ireo sary (na hanokatra azy ireo).
Ho fanampin'izay, manana olana roa lehibe hafa izy: ny efijery feno dia ampandehanana raha misoratra anarana ianao; ary amin'ny teny anglisy ihany izy io. Ho fanampin'izany, manana doka izy, izay mety hahatonga anao tsy hanelingelina anao rehefa miasa miaraka amin'ireo sary ianao.
Fotoflexer, mpamoaka sary an-tserasera matihanina
Voalohany indrindra, mamporisika anao izahay, raha mampiasa FotoFlexer, ianao dia manao izany amin'ny fiteny hafa fa tsy Espaniôla. Ny antony dia tsy fantatra loatra ny antony, fa ny kinova amin'ny programa dia tsy manana ny safidy rehetra hitanao amin'ny hafa. Ka raha hampiasa ilay fitaovana feno dia tsara kokoa ny mampidina azy amin'ny teny Anglisy, ohatra (manana fiteny 21 fanampiny ianao hisafidianana).
Izany dia nilaza fa ity mpamoaka sary an-tserasera ity dia iray amin'ireo tsara indrindra, na dia izany aza sarotra takarina aloha satria ny interface tsy toa Photoshop (an'ny tena manokana). Maimaimpoana ary manana tombony ianao afaka manafatra ireo sary avy amin'ny solosainao (takelaka, finday ...) na avy amin'ny url na tambajotra sosialy.
Ary eny, manana sosona izy hanampiana sary.
Misy safidy maro hafa azonao andramana. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapanao fa ny zava-misy fa tsy azonao apetraka amin'ny solosainao dia tsy midika hoe tsy afaka miasa miaraka amin'ny sary avy amin'ny mpamoaka sary an-tserasera ianao, mila mahita fotsiny izay mifanaraka amin'ny zavatra tianao tratrarina miaraka amin'izany programa izany ianao. avy amin'ny Internet.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ireo pejy 9 tsara indrindra hanovana sary amin'ny Internet